Ungayibuka kanjani iDisney + ku-TV 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
IDisney + iqale ngempumelelo enkulu yomphakathi nase-Italy, ngoba ihlanganisa opopayi abahamba phambili bezingane (kusuka kuma-Classics amahle kuya emikhiqizweni entsha ye-Pstrong) nochungechunge olukhethekile lwe-TV olususelwa emhlabeni we-Star Wars, ngaphandle kokukhohlwa konke Ama-movie we-Marvel. Ngaphandle komncintiswano onolaka weNetflix ne-Amazon Prime Video, abasebenzisi abaningi bakhetha ukugcina iDisney + njengokubhaliselwe kokusakazwa okudingwayo komndeni wonke, futhi kunikezwe nenani lentengo yokuncintisana (njengamanje i- € 6,99 ngenyanga noma ukubhaliswa konyaka kwama-69,99, € XNUMX).
Uma kuze kube manje sizikhawulele ekubukeni okuqukethwe kwe-Disney + kuphela kusuka ku-PC noma ikakhulukazi kuthebhulethi, sinezindaba ezinhle kakhulu kuwe: setha iDisney + kunoma iyiphi i-TVKuphakathi kokuthi i-Smart TV noma i-TV yesikrini esicaba (uma nje inembobo ye-HDMI) Ngakho-ke, ake sibheke ndawonye ukuthi singayibuka kanjani iDisney + ku-TV, ukujabulisa izingane nabazali abanentshisekelo kokuqukethwe okuvuthiwe kule nkundla.
FUNDA NONKE: I-Disney Plus noma i-Netflix? Yini engcono nokwehluka
Bukela iDisney + ku-TV
Uhlelo lokusebenza lweDisney + lutholakala kumadivayisi amaningi wokuzijabulisa egumbini lokuhlala, njengama-Smart TV kanye namadivayisi anokuxhumeka kwe-HDMI, okwazi ukwenza futhi usebenzise ngokunenzuzo okuqukethwe kwe-4K UHD ne-HDR kwencazelo ephezulu (uma izimo zenethiwekhi namadivayisi asetshenzisiwe akuvumela). Uma singenayo i-akhawunti ye-Disney + okwamanje, kungcono ukuyithola ngaphambi kokufunda iziphakamiso ezahlukweni zalo mhlahlandlela; Ukuze ubhalise i-akhawunti entsha, vele uye kusayithi lokubhalisa elisemthethweni, faka ikheli le-imeyili elivumelekile bese ulandela imiyalo enikezwe esikrinini.
IDisney + ku-Smart TV
Uma sinayo eyodwa I-Smart TV yakamuva (LG, Samsung noma i-Android TV) singakujabulela okuqukethwe yiDisney + ngokungena esitolo sohlelo futhi sibheke uhlelo lokusebenza I-Disney +.
Ngemuva kokufaka uhlelo, cindezela inkinobho kurimothi ukuvula isigaba se-Smart, cindezela uhlelo lokusebenza lweDisney + bese ungena ngemvume ngemininingwane esiyiphethe. Kusuka ku-Smart TV singazuza kukho konke okuqukethwe ngekhwalithi ephezulu kakhulu, sisebenzise (uma ithelevishini iyahambisana) futhi nencazelo ephezulu ye-4K UHD ne-HDR; Ukuthola ikhwalithi ephezulu kakhulu, kudingeka ukuxhumana okusheshayo kwe-inthanethi (okungenani ama-25 Mbps kulanda), ngaphandle kwalokho okuqukethwe kuzodlalwa ngekhwalithi ejwayelekile (1080p noma nangaphansi). Ngeminye imininingwane, sincoma ukuthi ufunde umhlahlandlela wethu. Ungaxhuma kanjani i-Smart TV kwi-Intanethi.
IDisney + kuma-consoles womdlalo
Uma sixhuma ikhonsoli yegeyimu yakamuva (PS4, Xbox One, PS5, noma i-Xbox Series X / S.), singakusebenzisa ukubuka okuqukethwe kweDisney + ekuphumuleni phakathi kweseshini eyodwa yomdlalo nenye, sizuze kukhwalithi efanayo esizoyithola ku-Smart TV.
Njengoba ikhonsoli isivele ixhunywe kuthelevishini nge-HDMI, singabuka okuqukethwe kweDisney + ngokusiyisa ebhodini lekhonsoli (ngokucindezela inkinobho yePS noma inkinobho yeXBox), uvule isigaba Isicelo O Aplicaciones nokuvula uhlelo I-Disney +, esivele ikhona ngokuzenzakalela kukho konke ukududuza okushiwo. Uma singakwazi ukuthola uhlelo lokusebenza olufakiwe, okumele sikwenze ukuvula isitolo sokudlala noma inkinobho yokusesha bese usesha uhlelo lokusebenza. I-Disney + phakathi kwalezo ezitholakalayo. Ngisho naseziduduzweni kungenzeka ukuthi usebenzise i-4K UHD ne-HDR (uma i-TV nayo iyahambisana), kepha kuphela uma sinezinguqulo ezinamandla kunawo wonke zamakhonsoli athengiswayo (PS4 Pro, Xbox One X, PS5 ne-Xbox Series X / S) .
Disney + Induku yakho ye-Fire TV
Uma singenayo i-Smart TV noma uhlelo lokusebenza olunikezelwe lungekho, singalungisa ngokushesha ngokuxhuma i- I-dongle Fire TV Stick, itholakala ku-Amazon ngemali engaphansi kuka- € 30.
Ngemuva kokuxhuma i-Fire TV ku-TV (ulandela imiyalo ebonwe ku- umhlahlandlela ozinikele), khetha umthombo ofanele ku-TV, vula isigaba Aplicaciones, sibheka iDisney + phakathi kwalabo abakhona ngokuzenzakalela bese ungena ngemvume. Amadivayisi we-Fire TV Stick avamile ne-Lite asekela okuqukethwe kwekhwalithi ejwayelekile (i-1080p noma ngaphansi); uma sifuna okuqukethwe kweDisney + ku-4K UHD kuzofanele sigxile I-Fire TV Stick 4K Ultra HD, itholakala ku-Amazon ngentengo ephezulu (€ 60).
Disney + i-Chromecast yakho
Omunye umshini wokudlulisa odume kakhulu manje okhona kuwo wonke amakhaya I-Google Chromecast, itholakala ngqo kusayithi le-Google.
Ngemuva kokuxhuma i-HDMI dongle ku-TV ne-Wi-Fi yasekhaya, sivula uhlelo lweDisney + ku-smartphone noma ithebhulethi yethu (sikukhumbuza ukuthi uhlelo lokusebenza luyatholakala nge-Android ne-iPhone / iPad), singena ngemvume ngemininingwane yesevisi, sikhetha okuqukethwe okuzophinda kukhiqizwe futhi, lapho nje sekutholakala, sicindezela inkinobho engenhla Ukukhipha, ukusakaza ividiyo ku-TV nge-Chromecast.
Disney + i-Apple TV yakho
Uma siphakathi kwabanenhlanhla abanikazi be-Apple TV egumbini, singayisebenzisa ukuze ubuke iDisney + ngekhwalithi ephezulu kakhulu.
Ukuze usebenzise iDisney + kudivayisi yegumbi lokuhlala enophawu lwe-Apple, ivule, uye kuphaneli yesistimu, cindezela uhlelo lokusebenza lweDisney + bese ufaka imininingwane yokufinyelela; uma uhlelo lokusebenza lungekho, sivula i-App Store ezinikele, usesho I-Disney + bese uyifaka kudivayisi. Njengoba i-Apple TV ethengiswayo isekela 4K UHD e l'HDR Ngayo, kuzokwazi ukubuka okuqukethwe kweDisney + ngekhwalithi ephezulu kakhulu, inqobo nje uma ithelevishini iyahambisana nalobu buchwepheshe futhi uma sinolayini we-Intanethi osheshayo (njengoba sekushiwo, kudingeka ukulanda okungama-25 Mbps).
Ukuletha i-Disney + kuthelevishini yethu kuyimpoqo uma sisebenzise le sevisi yokusakaza, ngoba ikhwalithi ephezulu kakhulu itholakala kuphela ngokumisa uhlelo ku-Smart TV noma ngokusebenzisa enye yezindlela eziboniswe kulo mhlahlandlela. Kubo bonke abasebenzisi abane-TV yesikrini esicwecwe elula ngaphandle kokusebenza okuhlakaniphile vele uthole i-Fire TV Stick noma i-Chromecast ukufinyelela okuqukethwe kwe-Disney + ngokushesha futhi kalula.
Uma singabalandeli abakhulu bokuqukethwe kwencazelo ephezulu, uzojabula ngokuqhubeka ufunda izindatshana zethu Ungayisebenzisa kanjani i-4K ku-Smart TV mi Zonke izindlela zokubuka iNetflix ku-4K UHD. Uma, ngakolunye uhlangothi, sifuna ezinye izinsizakalo zokubuka opopayi abasakazwayo ku-TV, qhubeka nje ufunde umhlahlandlela wethu. Buka ukusakaza opopayi ku-inthanethi, amasayithi nezinhlelo zokusebenza mahhala.